Jawaab Reer Hargeysa iyo Golaha Degaanka by Maxamed H. Mire (Hadhwanaagnews) Saturday, June 09, 2012 Marka hore waxa aan Salaan u dirayaa Bahda Hadhwanaag dhamaantood, Marlabaadka waxa aan salaan Marka hore waxa aan Salaan u dirayaa Bahda Hadhwanaag dhamaantood, Marlabaadka waxa aan salaan qaali ah u dirayaa C/qaadir M.SH. Faarax (Wadaaje) Waxa runtii ah in Dadka Reer hargeysa ay si qoto dheer ugu fiirsadaan arritaa uu saaxiibkay wadaaje Ka hadlay oo ina wada khusaysa hadii aynu nahay Beelaha degaanka Hargeysa ee dhabta ah. waayo marka ay arrintu Degaan joogto cida ay khusaysaa waa cida mahuraanka u ah Hargeysa waana aynu is ognahay , waxa inala gudboon hadii aynu nahay LIXDA Beelood ee Degaanka Hargeysa in aynu ilaashano Magaaladeena iyo adeega bulshadeena
waxa aan hambalyo u dirayaa C/qaadir M.SH. Faarax (Wadaaje) oo ka soo jeeda
Sh.Faarax Wadaaje oo Qof kasta oo Deganaa Hargeysa uu garanaayo wuxuu ahaa Imaamkii Masjid Jaamaca Hargeys , Isla Markaana Gudoomiyhii Ansaaru Diinka Hargeysa . dareenka uu muujiyay ee ku saabsan xuquuda Degaanka Reer Hargeysa . Allaa Mahad Leh Maxamed H. Mire